Ikhabhinethi eCoy Riverside kufutshane neCrieff
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguGeorgina
Indlu esecaleni komlambo ekhaphukhaphu nenomoya enembono entle kumbindi weScotland. Indawo efanelekileyo yokubalekela kuyo ukuze uphumle ngoxolo nokuphumla. I-cottage ijonge umlambo kunye namasimi angaphaya. (Ibhafu yobhedu enomtsalane kwindlwana yamaplanga nayo!)
Isiseko esigqibeleleyo sokuphonononga indawo ejikelezileyo kwaye kufutshane nendlela yelizwe ezolileyo .... ukwenza kube lula ukufikelela kuzo zonke iindawo ezintle ezinikezelwa yile nxalenye yeSkotlani. ICrieff ikumgama weekhilomitha ezimbini kuphela kwaye isikhululo sikaloliwe esikufutshane siseGleneagles.
Ikhabhini ingaphakathi kwimihlaba yeVictorian Manse ekufikelelwe kuyo ukusuka kwindawo yabucala. Kutshanje ihlaziywe kumgangatho ophezulu ngokuzonwabisa kunye nokuhombisa okumangalisayo, umgodi womlilo kunye nebhafu yobhedu yangaphandle.
Yindawo efanelekileyo yokubalekela kwimpelaveki yothando kwaye njengesiseko sokuhlola uMbindi weSkotlani.
Loch Fumana kunye
I-St Andrews yonke ingaphantsi kweyure yokuqhuba.
I-Edinburgh kunye neGlasgow zikwafikeleleka ngokulula ngemoto okanye ngololiwe.
Isikhululo seenqwelomoya sase-Edinburgh simalunga ne-50mins kude kunye nesikhululo seenqwelomoya saseGlasgow ngaphezulu nje kweyure.
IiTrossachs, iLoch Lomond, iOban, iGlencoe, iAviemore kunye neLochness zonke ziyafikeleleka kuhambo losuku.
Ikhabhinethi inebhedi entle eneepowusta ezine (1700 ububanzi) enelinen yebhedi ekumgangatho ophezulu kunye nebalcony egqunywe ngokumangalisayo kwiingcango ezimbini ezijonge emlanjeni.
Kukho ikhitshi elincinci ngaphandle kwegumbi lokuhlala eline-oveni edibeneyo / i-microwave kunye nefriji yefriji.
Igumbi lokuhlambela lineshawari enoxinzelelo oluhle kunye nembono entle evela kwiWC!
Kwigumbi lokuhlala uya kufumana isitovu esivuthayo esinamaplanga amaninzi kunye ne-Smart HD TV. Mininzi imidlalo/iipuzzle njl.njl.
Kukho indlu entle eyenziwe ngamaplanga yokuhlamba i-larch ecaleni kwendlela yegadi kunye nezinyuko ezimbalwa. Ibhafu lubhedu kunye ne-nickel kwaye igcwalisa malunga nemizuzu engama-20 (amanzi ashushu nabandayo!). Iimbono ezimangalisayo ukusuka kwindawo yokuhlambela ngapha kwamasimi..../okanye uvale umnyango webhodi yaseYorkshire kwaye ube nebhafu ngesibane sekhandlela okanye ujikelezwe zizibane. Nceda uqaphele ukuba ibhafu isenokungafumaneki xa kukho amaqondo obushushu aphantsi kakhulu ngaphandle nangona ewonke, ngaphandle kokuba i-sub-zero yonke ilungile!
Kukho ukuhamba okuninzi okujikeleze ifama okanye ngaphakathi kwendlela emfutshane kwaye ukuba ukhetha into enzima ngakumbi kukho iiMunros ezininzi ekufikeleleni ngokulula.
Wamkelekile ukuba uze nenja enye kodwa nceda uqaphele ukuba akukho ndawo ibiyelweyo ngaphandle komnyango.
ICrieff ikumgama weekhilomitha ezimbini kuphela kunye neevenkile zokutya ezibalaseleyo kubandakanya enye yeevenkile ezilungileyo zeentlanzi eSkotlani. Kukwakho nevenkile enkulu yeAldi kunye neCoop. IHolo yoKutya yaseCrieff ekwiSitalato esiPhakamileyo ithengisa ukutya okutofotofo kunye nokuba nevenkile yekofu/ikhefi kumgangatho osezantsi.
Kukho iindawo zokutyela ezininzi ezilungileyo kakhulu kufutshane ezibandakanya ukutya okulungileyo kwiLalique entsha eGlenturret, uAndrew Fairlie eGleneagles, iCromlix Hotel kunye neBarley Bree eMuthill. ECrieff kukho iDelivinnos kunye neCraobh ezithengisa ukutya okulula kakhulu.
Ifumaneka ngefowuni/umyalezo nanini na ifuneka.